Thumela Guest Post
Vikela Your Business Internet With a Cyber ​​Yimaphi Insurance
Bhose August 1, 20132013-08-01T00:00:54+00:002015-04-06T12:33:07+00:00 Featured, General
Uma usebenza ibhizinisi online eligcina eziningi ulwazi olubucayi idatha yezimali egameni amakhasimende akho kanye nabasebenzisi, ke kudingeka ukuba insured wokulwa kubaduni ezeba imininingwane security. Ungase adalule imininingwane yezimali abasebenzisi bakho futhi ayekethise nokuvikeleka yabo ngokwezimali uma internet kubaduni Hack zibe site lakho ukweba imininingwane ebucayi - futhi lokhu ngikubulale futhi ibhizinisi lakho at izingozi ezinkulu. Kodwa nge cover umshwalense Cyber ​​yimaphi endaweni, wena zivikelwe kangcono ngokumelene izingozi internet engase yonakalise wena noma amakhasimende akho.
Ingabe uyazi ukuthi Yahoo and LinkedIn phakathi kwabanye zaqoshwa zibe muva, alimaza imininingwane siqu izigidi Yahoo imeyili namabhizinisi abasebenzisi? Imizamo Kuphinde kwafakwa ukweba credit card kanye nolwazi yangasese kusuka kumasayithi ibhizinisi ngaphambi, futhi ungafuni ukuba uzifaka ezingozini ezinjalo ngaphandle ngokubeka net ukuphepha endaweni. Nanini cha zindla ukuthi kungumsebenzi of inkampani yakho ibamba ukuvikela idatha yakho kubaduni, ngoba kungenzeka empeleni kungabi konke uthembeke. Ngakho akufanele abeke ukulondeka website yakho ezandleni web ibamba inkampani yakho, nakuba nabo bazame konke bests kungenzeka ukuvikela idatha amawebhusayithi on yesikhulumi yabo.
Kukhona izinkampani zomshuwalense ethile ngokukhethekile Cyber ​​yomshuwalense icala, futhi ungakwazi ukuthenga nge-Internet ukuthenga Ukusabalala ibhizinisi lakho online. Lezi izinkampani zomshuwalense Cyber ​​isikweletu kwakuyoba ukuhlola amazinga ukuhlaselwa internet engahle wena nazo proffer ukuvikelwa firewall ukuze sivikele idatha yakho kanye nolwazi nokuvikeleka, bese udweba up an Ukusabalala inqubomgomo yomshuwalense ukuvikela ibhizinisi lakho online. Umshwalense Your bazokwazi nxephezela ngokwanele kuwe futhi kukuvikele kumangala ezibizayo, ukulahlekelwa ibhizinisi, futhi idumela owonakele online.
Uma ucabangela nekhono zobuchwepheshe of kubaduni kanye nezingozi eziyiyo ibhizinisi internet lakho kanye namakhasimende, uyofuna ukuvikela idatha amakhasimende 'futhi imininingwane eyimfihlo ngokuthola Cyber ​​umshuwalense icala namuhla. Uma izinkampani ezinkulu babengase kuhlelo ukuhlaselwa internet okuqhubekayo, ke wena no exception; futhi uma ibhizinisi lakho online kuwufanele yini, ke kungaba iyizisulu eziyinhloko for kubaduni online. Cyber ​​umshwalense isikweletu kungaba security plan back-up udinga, futhi kungase umehluko phakathi impumelelo inthanethi kanye nokulahlekelwa ibhizinisi kuhambisana kumangala. Hamba for one namuhla, futhi uzowathola thokozani nina wenza.
Tags:Cyber Liability Insurance
Factors That Impact Negatively On Your Insurance Premium Rates
Isihlobo Customer abaphathi, Engozini Advisor and Field Analyst Izikhala
Indlela Hlaziya Best Insurance Brokers and Companies
10 Izicupho ukuba Gwema lapho Ukuthenga Auto Insurance Izinqubomgomo
Ukuqonda Life Insurance: An Introduction
Life Insurance: Izinhlobo Life Insurance Izinqubomgomo kanye Indlela Yokwandisa Them
Fire Insurance Claims: Okufanele Ukwenze Uma Your Business Izakhiwo Goes Up In A Fire Incident